सुनको भाउ बढ्यो, प्रतितोला कति ?
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा सुनको भाउ मंगलबार तोलामा ३०० रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार तोलामा ३०० रुपैयाँले बढेर प्रतितोला छापावाल सुन ७५ हजार ३०० रुपैयाँ र तेजाबी सुन ७५ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ । यसअघि कारोबार पहिलो र दोस्रो दिन क्रमशः आइतबार र सोमबार सुनको भाउ समान थियो । आइतबार सुन तोलामा २००...
सुनको भाउ बढ्यो, चाँदीको घट्यो, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
काठमाण्डौ । यो साता पहिलो कारोबार दिन आइतबार सुनको भाउ तोलामा २०० रुपैयाँले बढेको छ । गत शुक्रबारको तुलनामा सुनको भाउ तोलामा २०० रुपैयाँले बढेर आइतबार प्रतितोला छापावाल सुन ७५ हजार रुपैयाँ र तेजाबी सुन ७४ हजार ७०० रुपैयाँ कायम भएको हो । नेपाली बजारमा सुनको भाउ गत साताको पहिलो कारोबार दिनदेखि नै घट्न थालेकोमा यो साताको पहिलो दिनदेखि...
कस्तो रह्यो यो साता सुनको भाउको उतारचढाव ? हेर्नुहोस्
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा यो साता सुनको भाउ २०० रुपैयाँले मात्र घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार यो साता पहिलो कारोबार दिन आइतबार प्रतितोला छापावाल सुन ७५ हजार रुपैयाँ र तेजाबी सुन ७४ हजार ७०० रुपैयाँ रहेकोमा अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार प्रतितोला छापावाल सुन ७४ हजार ८०० र तेजाबी सुन ७४ हजार ५०० रुपैयाँमा झरेको हो...
माघ लागेसँगै ह्वात्तै बढ्यो सुनको भाउ, प्रतितोला कति ?
काठमाण्डौ । लगातार घटिरहेको सुनको भाउ माघ महिनाको पहिलो दिन एकैपटक तोलामा ७०० रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज बुधबार सुनको भाउ तोलामा ७०० रुपैयाँले बढेर प्रतितोला छापावाल सुन ७४ हजार ७०० रुपैयाँ र तेजाबी सुन ७४ हजार ४०० रुपैयाँ कायम भएको छ । पुसको अन्तिम दिन हिजो मंगलबार सुनको भाउ प्रतितोला छापावाल सुन ७४...
सुनको भाउ आज तोलामा रु. ८०० ले घट्यो, समग्रमा यो महिना रु. २५०० बढ्यो
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा सुनको भाउ आज मंगलबार एकैदिन तोलामा ८०० रुपैयाँले घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार हिजो सोमबारको तुलनामा आज एकैदिन तोलामा ८०० रुपैयाँले घटेर प्रतितोला छापावाल सुन ७४ हजार रुपैयाँ र तेजाबी सुन ७३ हजार ७०० रुपैयाँ कायम भएको छ । हिजो सुन प्रतितोला छापावाल ७४ हजार ८०० र तेजाबी ७४ हजार ५००...
घट्ने क्रममा सुनको भाउ, चाँदीमा पनि गिरावट
काठमाण्डौ । यो साता कारोबारको दोस्रो दिन सोमबार सुनको भाउ थोरैले घटेको छ । नेपाली सुन बजारमा हिजोको तुलनामा सुनको भाउ तोलामा २०० रुपैयाँले घटेको हो । सुनको भाउ तोलामा २०० रुपैयाँले घटेर सोमबार प्रतितोला छापावाल सुन ७४ हजार ८०० रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला ७४ हजार ५०० रुपैयाँ कायम भएको छ । सुनको भाउ आइतबार प्रतितोला छापावाल ७५ हजार...
सुनको भाउ फेरि बढ्यो, आज प्रतितोला कति ?
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा सुनको भाउ यो साता पहिलो कारोबार दिन आइतबार सुनको भाउ तोलामा ४०० रुपैयाँले बढेको छ । गत साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबारको तुलनामा सुनको भाउ तोलामा ४०० रुपैयाँ बढेर आइतबार प्रतितोला छापावाल सुन ७५ हजार रुपैयाँ र तेजाबी सुन ७४ हजार ७०० रुपैयाँ कायम भएको छ । गत शुक्रबार प्रतितोला छापावाल सुन ७४ हजार ६०० रुपैयाँ र...
सुनको भाउमा आज पनि भारी गिरावट, प्रतितोला कति ?
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा सुनको भाउ यो साता अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार पनि घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार सुन तोलामा एकैदिन ९०० रुपैयाँले घटेको छ । इरान र अमेरिकाबीच उत्पन्न तनावका कारण सुनमा लगानी बढ्दा मागमा आएको बढोत्तरीले लगातार भाउ आकासिँदै गएको थियो । इरान र अमेरिकाबीचको तनाव साम्य हुन सक्ने...
सुनको भाउ बढ्ने क्रम थामियो, एकैपटक रु. १ हजारले घट्यो
काठमाण्डौ । लगातार सर्वाधिक उचाइ कायम गरिरहेको सुनको भाउ बिहीबार एकैपटक तोलामा १ हजार रुपैयाँले घटेको छ । इरान र अमेरिकाबीच उत्पन्न तनावका कारण बढ्दै गरेको सुनको भाउ बुधबार एकाएक घटेको हो । इरान र अमेरिकाबीचको तनाव साम्य हुन संकेतसँगै अब सुनको भाउ पनि घट्दै जाने विश्लेषकहरु बताउँछन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबार...
सुनको भाउले रेकर्ड तोड्यो, तोलाको रु. ७६ हजार ५००, कारोबार प्रभावित
काठमाण्डौ । नेपालको इतिहासमा सुनको भाउले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । सुनको भाउ बुधबार एकैदिन तोलामा १ हजार रुपैयाँले बढेर नेपाली बजारमा अहिलेसम्मकै उच्च भाउको रेकर्ड कायम गरेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार एकैदिन तोलामा १ हजार रुपैयाँले बढेर सुनको भाउ प्रतितोला छापावाल ७६ हजार ५०० रुपैयाँ र तेजाबी ७६ हजार २००...
लगातार रेकर्ड बनाइरहेको सुनको भाउ आज घट्यो, किन्नेभन्दा बेच्ने बढी
काठमाण्डौ । लगातार उच्च मूल्यको रेकर्ड बनाइरहेको सुन भाउ यो साता कारोबारको तेस्रो दिन मंगलबार घटेको छ । सुनको भाउ सोमबारको तुलनामा तोलामा रु. ५०० ले घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार सुन प्रतितोला छापावाल रु. ७५ हजार ५०० र तेजाबी रु. ७५ हजार २०० कायम भएको छ । हिजो सोमबार सुनको भाउ प्रतितोला छापावाल रु. ७६ हजार र...